ဘယ်လိုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အပူချိန်စတိုးဆိုင် HGH? - HGH ဖူးခက်
ဇူလိုင်လ 9, 2019
၁။ သိုလှောင်ခြင်းရောနှောခြင်းမရှိပါ (လူ့သက်တမ်းမတိုးသည့်လူ့ကြီးထွားမှုဟော်မုန်း)
ရောနှောထားသော activated HGH ၏ 2. သိုလှောင်မှုအခြေအနေများ
4. ကျွန်ုပ်၏ HGH ကိုအေးခဲလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း
HGH ၏ 5. Crystallization
ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, ပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေး Genotropin goquick 36 IU သည်၏ HGH ယူ
genotropin ကိုသက်ဝင်ဖို့ဘယ်လိုအဘို့အောက်က link ကိုကြည့်ရှုပါ။
သိုလှောင်မှုကိုရောထွေးမဟုတျပါဘူး (Non-activated ကြီးထွားဟော်မုန်း)
အမှုန့်တစ်ပြည်နယ်အတွက် Unactivated, ရောထွေးမရကြီးထွားဟော်မုန်း 2-8 တစ်ဦးကနိုင်ငံတကာဖြန့်ဝေမှုကာလအဘို့ဥပမာ, ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်ကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှောင်မိုက်အရပ်၌ 25-1 ကို C ဒီဂရီ (အခန်းအပူချိန်) ၏အပူချိန်မှာ3ရက်သတ္တပတ်အထိရှိနိုင်ပါသည် သို့မဟုတ် 4-6 ရက်ပေါင်းဒါမှမဟုတ်လူနာရဲ့ခရီးပို့ဆောင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ HGH ထိုင်း ရေခဲနှင့်အတူတစ်ဦးဆေးဝါးကုသမှုကွန်တိန်နာအတွင်းအမြန်ချောပို့မသက်ဆိုင်ပြင်ပရာသီဥတုနှင့်အပူချိန်၏, ကယ်တင်တတ်၏
နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာခုနှစ်တွင်သင်အရေအတွက်ပေါ် မူတည်. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ခုသို့မဟုတ် thermo အိတ်များအတွက်အပူကွန်တိန်နာ add နိုင်ပါတယ်
ရောထွေး, activated HGH ၏သိုလှောင်မှုပမာဏအခြေအနေများ
somatotropin ရောစပ်ပြီးနောက်တစ်ဦးရောနှော-HGH လိုအပ်သောအထူးသိုလှောင်မှုအခြေအနေများ, လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းမြင့်မားသောအပူချိန်မှအထိခိုက်မခံတစ်ဦးတက်ကြွစွာပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်လာသည်။
အဆိုပါရောနှောကြီးထွားဟော်မုန်း၏အကောင်းဆုံးအပူချိန် 8-13 ကနေသုညအထက်တွင်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအမှု၌အေးခဲပါဘူး
ပိုမိုမြင့်မားသောအပူချိန်အဘယ်သူမျှမ 12 နာရီထက် ပို. နှင့် 25 ဒီဂရီထက်မပိုမြင့်!
ကျွန်တော်တို့၏ HGH ထိုင်းဆေးဝါး တစ်ဦးအပိုဆောင်း option ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ခရီးသွားများအတွက်အပူအိတ်ထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်အမိန့်အားမရသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သား၏အဓိကအမိန့်နှင့်အတူအိတ်ကယ်နှုတ်တော်မူလိမ့်မည်ဟုနောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာအကြောင်းကိုမမေ့မလြော့ပါကျေးဇူးပြုပြီး
HGH ၏ရောနှော overheats အကယ်. သင်ကခွင့်ပြုလျှင်, အရည်, အရောင်အတွက် turbid ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် - ကမသုံးပါ
သငျသညျအကြှနျုပျ၏ HGH အေးခဲလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း
အပူလွန်ကဲမတူဘဲ, ကြီးထွားဟော်မုန်းနှင်းခဲများနှင့်ရေခဲသောအခြေအနေများသည်းခံ သာ. ကောင်း၏, သင်မူကားလုံခြုံစိတ်ချစွာ 50% အထိပေမယ့်မြင့်မားတဲ့သောက်သုံးသောနှင့်အတူအေးခဲကြီးထွားဟော်မုန်းကိုသုံးနိုင်သည်
HGH ၏ crystal
HGH အမှုန့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကြည်လင်ပြည်နယ်သို့သွားနိုင်ပါတယ် - ဤလုံးဝပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်
ယင်းဆောင်းပါးတွင်ရေးသားလူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းဒေါက်တာခရစ် Volski ၏ endocrinologist ဖြစ်သူအမျိုးအစား 1 အထူးကုဓာတ်ခွဲခန်းသုတေသနဆရာဝန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ယခင်ဆောင်းပါး အဘယျသို့တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် Pfizer ကနေ Genotropin 36 IU သည် HGH များအတွက်အသုံးပြုသနည်း
next ကိုဆောင်းပါး Genotropin GoQuick 12 36 IU သည် mg - ရုပ်ပုံများနှင့်အတူအဆင့်-by-step activation ညွှန်ကြားချက်
မူပိုင်ခွင့်© 2021 HGH Phuket ။ | E-commerce မှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 0167552340004 | FDA က Approved